10 qof oo ku dhimatay shil Diyaaradeed - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka 10 qof oo ku dhimatay shil Diyaaradeed
Maamulka duulimaadyada rayidka ee Koonfurta Suudaan ayaa u diray koox soo baarta shil diyaaradeed oo ka dhacay gobolka Jonglei oo ay ku dhinteen 10 qof, oo ay ku jiraan laba shaqaale ah.
Kur Kuol, oo ah agaasimaha waaxda duulimaadyada rayidka ee Koonfurta Suudaan, ayaa u sheegay VOA in baaritaannada hordhaca ah ay soo jeedinayaan in labada matoor ay ciladoobeen daqiiqado ka hor inta aysan diyaaradda dhicin.
Kaliya 10 daqiiqo markii aan u jirnay Pieri, sida ku cad macluumaadka aan hayno, mid ka mid ah matoorka ayaa istaagay ka dibna wuxuu ku sigtay inuu ku laabto garoonka diyaaradaha, kan kalena wuu istaagay sidaasna diyaaradda ayaa ku burburtay, ”ayuu yiri Kuol.
Diyaaraddan rakaabka ee HK-4274 oo ganacsi ayaa waxaa iska leh shirkadda South Supreme Airlines, oo uu iska leeyahay ganacsadaha Koonfurta Suudaan Ayii Duang Ayii. Waxay ka duushay Juba kuna sii jeeday Pibor markii ay ku dhacday Pieri Airstrip ee Uror County.
Guddoomiyaha Gobolka Denay Jock Chagor ayaa tacsi u diray qoysaska dadkii wax ku noqday. Hadal uu sii daayay Talaadadii, Chagor wuxuu xaqiijiyay dhammaan sideed rakaab ah iyo laba shaqaalihii saarnaa inay ku dhinteen shilka.
Baarayaasha Hay’ada Duulista Hawada ee Koonfurta Suudaan ayaa raadinaya sanduuqa madow ee diyaaradda, ayuu yidhi Kuol.
Diyaaradda ayaa xaaladdeeda wanaagsaneyd kahor inta aysan duulin, sida uu sheegay Ayii Duang Ayii, oo ah agaasimaha shirkadda diyaaradaha ee South Supreme Airlines.
“Ma jirto diyaarad loo oggol yahay inay duusho marka ay jiraan cilado farsamo. ma aqbali karo inuu kaco markii uu ogyahay inay jiraan dhibaatooyin ka jira diyaaradda, marka ma ogin waxa ku dhacay diyaaradda, ”ayuu Ayii sheegay isagoo ku sugan Focus.
Bishii Maarso 2017, Antonov An-26 oo ka tirsan shirkadda South Supreme Airlines ayaa lagu burburiyay dab ka dib markii ay ku dhacday garoonka diyaaradaha ee Wau oo ay ka duushay duulimaad gudaha ah.
Previous articleDHAGEYSO: Warka Duhur ee Radio Risaala 04-03-2021
Next articleSomaliland oo War kasoo saartay doorashooyinka & Abaaraha